Golaha Shacabka oo ku kala aragti duwan cabashada ciidamada ee mushaar la’aanta – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo ku kala aragti duwan cabashada ciidamada ee mushaar la’aanta
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa cirka isku shareeray cabashada ciidamada Milateriga Soomaaliya ee ku saabsan in ay waayeen mushaar iyo garaam islamarkaana ay ka soo baxeen difaacyada degmooyin iyo degaano katirsan Gobalada Shabeelooyinka, waxaana isa soo taraya walaaca arintaasi laga qabo.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaasi uga hadlay siyaabo kala duwan. Qaar kamid ah Xildhibaanada waxay taageerayn cabashada ciidamada halka qaar kalane ay beeniyeen in ciidanka ay wajahayaan mushaar la’aan iyo dhibaatooyin kale.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay in 2019 ay ciidamada Soomaaliyeed wajahaan daryeel la’aan Xukuumadda Soomaaliya-na ay ka been sheegayso daryeelka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
“Waxaan ugu baaqaynaa Madaxda Qaranka in aan la siyaasadayn mushaarka ciidamada, lagana dhaafo ciidamada hadalada xaqiiqada ka fog ee warbaahinta loo marinayo” ayuu qabaa Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
Si lamid ah Xildhibaan Mahad Salaad waxaa aragtidaasi qaba Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna ku taliyay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Xukuumadiisa ay is casilaan si dalka loo badbaadiyo.
“Doontu inta aysan dagin ka hor, dadka qaar waa in ay dagaan” ayuu ku bilaabay qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook Xildhibaan Fiqi. “Ka soo bixitaanka CXD labada shabeelle waxay dalka u horseedeysaa xaalad khatar ah oo in laga soo kabsado ay adkaan doonto”ayuu yir Axmed Macalim Fiqi.
“Waxaa hore loogu fashilmay amniga Muqdisho, sababo la xariira maamul xumo, musuq maasuq iyo nin jeclaysi, waxaana muuqata cudurka musuq maasuq uu u gudbay ciidamada difaacyada ku sugnaa”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Axmed Macalim Fiqi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Aragti ka badalan mida Xildhibaan Mahad Salaad iyo Axmed Macalim Fiqi waxaa qaba Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo katirsan Golaha Shacabka iyo Guddiga Difaaca ee BFS. Xildhibaan Warfaa oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay bixisay mushaarka ciidamada.
“Ciidamada waa qaateen mushaarkooda, kuwa dhiman waxaa ku socota diiwaan gelin, waxaan hubinay in Xukuumadda mushaarka ciidamada bixisay waana xaqiijinay” ayuu yiri Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Ciidamada ka soo baxaya furumaha dagaalka ma filayo in ay yihiin ciidan qaran, hadii ay yihiin kama soo baxeen aagga dagaalka ee waysan aheyn ciidan qaran”ayuu yiri Sadiiq Warfaa oo ah Xoghaya guddiga difaaca ee Golaha Shacabka.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo sidoo kalane katirsan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa arimo siyaasadeed ku tilmaamay ka soo bixitaanka furumaha dagaalka iyo cabashada ciidamada Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay bixisay mushaarka iyo garaamka ciidamada islamarkaana bil kasta ay qaataan qayla dhaanta muuqatana ay tahay ciidamo meelo badan lacag sharci darro ah ka qaadan jiray oo laga joojiyay.
“Ciidamada waxaan hubaa in ay qaatayn mushaarkooda, kuwa qaylinaya waa kuwa ka shaqeeya hoteelada iyo kuwa kale ilaalada ka ah shirkado gaar loo leeyahay” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
“Xubno siyaasiin ah ayaa ka dambeeyo cabashada ciidamada, waxaa ku jirta gacan gurucan oo qaran dumis ah” ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo la hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho.
Guddiga difaaca ee Golaha Shacabka oo sheegay in Xukuumadda ay bixisay mushaarka ciidamada
Xilliiga uu furmayo Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo lagu dhawaaqay